Uyilo lweplastikhi yaseChina uMvelisi kunye noMthengisi | Mestech
Uyilo lwemveliso yePlastiki kukuchaza ubume bemveliso kunye nolwakhiwo, ubungakanani kunye nokuchaneka, umgangatho wembonakalo. Isekwe kwiimfuno zeemveliso kunye neempawu zezinto ezisetyenzisiweyo. Umgangatho woyilo lweemveliso zeplastiki umisela ngokuthe ngqo ukusebenza kunye neendleko zokuvelisa.
Uyilo lwemveliso yePlastiki lubandakanya uluhlu olubanzi lwezinto. Ukuziqhelanisa, iintlobo ezahlukeneyo kunye neefom zokwakha ziya kudibana. Ulwazi olubandakanyekayo lubandakanya: ukukhethwa kwezinto eziphathekayo, ubudlelwane phakathi kwesakhiwo sokubumba kunye nemveliso, ukubonakala kweziphene kubangelwa yi-injection molding, ukulungelelaniswa phakathi kweebhokhwe, ukudibanisa phakathi kweebhokhwe kunye nesakhiwo esilungiselelwe umsebenzi othile, njl.
Inkampani yakwaMestech ibonelela abathengi ngoyilo lwenxalenye zeplastiki kunye nokubumba inaliti yeemveliso zedijithali, izithethi zamandla, ikhaya elikhanyayo, izibane zokukhanyisa, i-Kitchenware kunye netafile, ukhathalelo lonyango, iikhompyuter, iimveliso zepheripherali. La malungu aneemilo ezahlukeneyo kunye nobukhulu, kubandakanya:
(1), izindlu zeplastiki
(2), isakhelo seplastiki
(3), inxalenye elubala
(4), ezimbini inxalenye yokubumba
(5), iindawo zeplastiki manzi
(6), Gear, izixhobo iintshulube
(7), Umsonto kunye Screw lead
(8), iindawo udonga Thin
(9), Cwangcisa iindawo zobhiya
(10), iindawo Elastomer
Iindawo Inaliti kabini
Emva kokuba umzobo uyilo iinxalenye zeplastiki igqityiwe ngokusisiseko, uhlalutyo lomngundo kunye nokuqinisekiswa kwebhodi yezandla ziyafuneka ngokubanzi. Rhoqo guqula kwaye uphucule uyilo, kwaye ekugqibeleni ubeke kwimveliso yokubumba kunye neenxalenye zemveliso.
IMestech ibonelela abathengi ngoyilo lwamalungu eplastiki, ukwenza ukungunda kunye nemveliso yenaliti yokubumba. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi, nceda unxibelelane nathi kwaye siya kukubonelela ngeyona nkonzo yethu intle.
Egqithileyo Uyilo lwezixhobo zasekhaya
Okulandelayo: Uyilo lwenxalenye yensimbi
Automobile lampshade ziphene sukube
Izinto zeplastiki kwiminyango yemoto